သဘာဝအားအင်: “ဆား” ပွင့်လေးရဲ့ အသုံးဝင် အာနိသင်များ
by ပိုပိုဇော်(သဘာဝအားအင်)September 16, 2013 at 10:29am
ဆေးသိပ္ပံပညာရှင်များရဲ့သုတေသနပြုချက်များအရ၊ သဘာဝပင်လယ်ရေမှ ချက်လုပ်သောဆားဟာ စားပွဲတင်ဆားထက် ပိုမိုဆေးဘက်ဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ crystal salt (ခေါ်) အိုင်အိုးဒင်းဆား ကတော့ အိုင်အိုဒင်းဓာတ်ချို့ တဲ့သူများ အတွက်အထူးသင့်တော်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ ရေဓာတ်နဲ့အငန်ဓာတ်မရှိရင် အသက်မရှင်နိုင်ပါဘူး။ ဥပမာ သွေး၊ ချွေး၊ မျက်ရည်တွေဟာ အငန်ဓာတ်ရှိနေလို့ ၊ လူတစ်ဦးအနေဖြင့် တစ်နေ့တာ လိုအပ်တဲ့ ဆားပမာဏဟာ အသက်အရွယ်အလိုက် ၁၅၀ဝ မီလီဂရမ်မှ ၂၃၀ဝ မီလီဂရမ်မျှလိုအပ်ပါတယ်။
ကဲ….ဆားပွင့်လေး မှ ဘယ်လို ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးတွေ ရရှိနိုင်မလဲ ? အောက်ပါအတိုင်းလေ့လာကြည့်လိုက်ကြရအောင်။
1. ဆားဟာ အပူဓာတ်အနေနဲ့ လူတွေကိုကောင်းကျိုးပြုနို င်လို့ ၊ ဥပမာ မိုးမိ၍ခိုက်ခိုုက်တုန်ချမ်း နေသူများကို ဆားဖျော်ရည် တိုက်ခြင်းဖြင့် ချက်ချင်းဆိုသလို ခန္ဓာကိုယ် အနွေးဓာတ်ရရှိလာစေပါတယ်။
2. ဆားဟာ ကိုယ်ခံစွမ်းအားကို ကောင်းမွန်စေလို့ ၊ အအေးမိ၊ နှာစေး၊ ချောင်းဆိုး စတဲ့ ရာသီးဖျားများကို အလွယ်တကူ မကူးစက်စေနိုင်ပါဘူး။
3. ခေါင်းလျှော်တဲ့အခါ ရေထဲမှာ ဆားနည်းနည်း ထည့်လျှော်ပေးပါက၊ ဆံပင်ကျွတ်တာကို ကာကွယ်နိုင်သလို၊ ဗောက်များ လဲ သေစေပါတယ်။
4. ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ဆားဓါတ်နည်းရင် အားအင်ကုန်ခမ်းပြီးမူးဝေတတ် တာကြောင့်၊ ချွေးထွက်များသောကာယလုပ်သား များ၊ ၀မ်းလျှောသူများ၊ အာဟာရနည်းပြီးအားပြတ်သောလူမ မာများနှင့် နွေရာသီလို အပူဓာတ်ပြင်းကာ ချွေးထွက်လွန်သူများ ဓာတ်ဆားရည်ကို သောက်ပေးသင့်ပါတယ်။
5. မြွေကိုက်ခံရပါက၊ ဆေးရုံ/ဆေးခန်းသို့မသွားခင် အဆိပ်ရဲ့ စုဖွဲ့ မှုကိုအပူနဲ့ တိုက်ထုတ်သည့် အနေဖြင့် ဆားရည်ပျစ်ပျစ် ဖျော်သောက်ပေးရပါတယ်။ ဒါမှသာ အဆိပ်များပြန့် မလာတော့ဘဲ၊ အသက်ချမ်းသာရာ ရစေမှာပါ။
6. သွားကိုဆားနဲ့ ပုံမှန်တိုက်ပေးပါက၊ သွားပိုးမစာ/ သွားခိုင်စေသည့်အပြင်၊ ခံတွင်းရနံ့ လဲ ရှင်းသန့် စေမှာပါ။ အာခံတွင်းနံ့ဆိုးသူများ နှင့် တံတွေးမကြာခဏထွက်တတ်သူများသ ည် ဆားငံရည်ပလုပ်ကျင်းပေးခြင်း ဖြင့် သက်သာရာရစေပါတယ်။
7.ယားနာရှိသူများ၊ အသားရည်ခြောက်သွေ့ သူများ၊ ၀ဲနှင်းခူဝေဒနာသည်များ၊ သွေးမသန့် ၍အရေပြားယားယံကာ အဖု အပိမ့်ထွက်သူများသည် ဆားငံရည်ဖြင့် ရေချိုးသန့် စင်ပေးခြင်းဖြင့် သက်သာပျောက်ကင်းစေပါတယ်။
8.ဆားဟာ ချွေးပေါက်များပွင့်လာကာ၊ အရေပြားထဲရှိ သွေးလည်ပတ်မှု ပုံမှန်ဖြစ်စေလို့ဝက်ခြံပေါက်သူများ သနပ်ခါး ထဲမှာ ဆားရေကျဲရောစပ်လိမ်းပေးနိုင်ပါတယ်။ အသားအရေကိုလဲ ချောမွေ့ လာစေပါတယ်။
9.လမ်းများများလျှောက်သူများ၊ မတ်တပ်အကြာကြီးရပ်၍အလုပ်လုပ်ရသောသူများ နှင့် ခရီးရှည်သွားပြီးနောက် ခြေ ထောက်များသွေးကျပြီး ရောင်ရမ်းနာကျင်ပါက ဆားရည်စိမ်ပြီး အသာအယာ နှိပ်နယ်ပေးခြင်းဖြင့် သက်သာလာ စေပါတယ်။
10.မွေးရာပါ မျက်စေ့မှုန်သူများ နှင့် အညောင်းထိုင်ကာ အပူခဲသူများသည် ညအိပ်ယာဝင်ခါနီး ဆားကြမ်းနင်းပေးပြီး၊ ဒူးခေါင်းအထက်မှ ရေလောင်းချကာ ပုံမှန်လုပ်ပေးခြင်းဖြင့် မျက်စေ့အမြင် ကြည်လင်စေပါတယ်။
မျက်သားတက်ကာ၊ မျက်စေ့ယားယံသူများအတွက် ဆားရည်ကြည်အနဲငယ်ကို မျက်စဉ်းခပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
11.သင်တစ်နေ့ တာစားလိုက်သော ဆားပမာဏ၏ ၁/ ၄ ပုံဟာ အရိုးထဲရောက်ရှိသွားပြီး၊ အရိုးကိုသန်မာလာစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် အရိုးကြွတ်ဆတ်ရောဂါရှိသူများအတွက် သင့်တင့်မျှတသော ဆားငံရည် သောက်သုံးပေးသင့်ပါတယ်။
12.ပင်လယ်ဆားငံရည်ထဲမှာ ခန္ဓာကိုယ်ထဲရှိ serotonin နှင့် melatonin ဟိုမုန်းများကို လှုံ့ ဆော်ပေးသောကြောင့်၊ ပင်လယ်လေ ရှုရိုက်ပေးပါက၊ စိတ်ကျရောဂါမဖြစ်တော့ဘဲ လူကိုလန်းဆန်းတက်ကြွလာစေကာ၊ ညဘက်လဲ ကောင်း ကောင်း အိပ်ပျော်စေပါတယ်။ ဒါ့ပြင် ပင်လယ်လေ ၀၀ရှုရှိုက်ပေးခြင်းဖြင့် အဆုတ်ကိုလည်း ကျန်းမာစေပါတယ်။
14. ဆား ဟာ ကိုယ်ခန္ဓာအလေးချိန်ကို ကျစေတယ်ဆိုတာကို ယုံမှားသံသယမဖြစ်ပါနှင့်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၊ ဆားဟာ အစာ ချေဖျက်မှုကို အားပေးပြီး၊ အူလမ်းကြောင်းကို အထောက်အကူပြုကာ ၀မ်းမချုပ်စေတဲ့အတွက် ကိုယ်အလေးချိန် တက်ခြင်းကို ဤနည်းဖြင့် တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ ကာကွယ်ပေးခြင်းပါဘဲ။
15. ဆားဟာ ကိုလက်စထရောပမာဏကို လျော့ချပေးတာကြောင့်၊ နှလုံးသွေးကြောများအဆီမပိတ် ဘဲ ပွင့်လန်းလာကာ နှလူံခုန်နှုန်းကို ပုံမှန်ဖြစ်စေလို့ ၊ နှလုံးကျန်းမာစေပါတယ်။
16. ပန်းနာဝေဒနာသည်များ အလွန်အမင်းမွန်းကြပ်လာပါက၊ ဆားမှုန်ကို လျှာပေါ်ပွတ်ပေးပြီး၊ ရေတိုက်ပေးသင့်ပါတယ်။
သင့်တင့်မျှတသော ဆားပမာဏဟာ ခန္ဓာကိုယ်ထဲရှိ အင်ဆူလင်ပမာဏကိုလျော့ချ၍၊ အချိုဓာတ်ပမာဏကို ထိန်းညှိပေး တာကြောင့် ဆီးချိုရောဂါသည်များ အားထားလောက်ပါတယ်။
ပိုတက်စီယမ်ဓာတ်ဟာ ကြွက်သားများကို ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်နိုင်စေရ န် အထောက်အကူပေးတာကြောင့် ၊ သဘာဝ ပိုတက်စီယမ်ကြွယ်ဝသော ပင်လယ်ဆားကြမ်းရည်ကို သင့်တင့်လျောက်ပတ်စွာ သောက်သုံးခြင်းဖြင့် ကြွက်တက်ခြင်း မဖြစ်စေပါ။
ဒါ့ပြင် ကြွက်သားများကိုလဲ ခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်။ အသံဝင်ချွဲသလိပ်ကပ်သူများ နှင့် အာသီးရောင်သူများ ဆားရည်နွေးနွေးဖြင့် အာသီးကိုပလုပ်ကျင်းပေးနိုင် ပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်ထဲရှိမလိုလားအပ်သောအက်ဆစ်များကို ဆီးအဖြစ်ထုတ်ပေးစေလို့ ၊ ကျောက်ကပ်ကို ကျန်းမာစေပါတယ်။ ဒါ့ပြင် လိင်စိတ်ဆန္ဒ ကို တိုးမြှင့်ပေးပါတယ်။
အိုင်အိုဒင်းဆားဟာ ဦးနှောက်ဆဲလ်များကို ကောင်းကျိုးပြုစေလို့ ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များ စားသုံးပေးသင့်ပါတယ်။
ကျန်းမာရေးအပြင် အိမ်ရှင်မများအတွက် ဆားရဲ့ အကျိုးပြုပုံတွေကတော့
(၁) ရေစိုနေတဲ့ယမ်းမီးခြစ်ကို ဆားပေါ်မှာ တင်ထား ရင် မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်း ခြောက်သွေ့လာနိုင်ပါတယ်။
(၂) ဘုရားစင်ပေါ်က ပန်းများကို ကြာကြာခံအောင် ပန်းအိုးထဲကရေ ကို ဆားနဲနဲခပ်ပေးရပါမယ်။
(၃) မီးဖိုချောင်သုံး ဓား ကို ဆားရေနဲ့ သွေးပေးရင် ဓားပိုထက်လာပါတယ်။
(၄) အိပ်ယာတွင် ဂျပိုးတွယ်ပါက၊ ခြင်ထောင် နဲ့ ဖျာတို့ ကို ဆားငန်ရေ လောင်းပေးနိုင်ပါတယ်။
(၅) အသစ်ဝယ်လာသော ဖန်ခွက်၊ ဖန်ပန်းအိုး၊ ဖန်ကန်းပန်ပြား စသည့်ဖန်ထည်ပစ္စည်းတို့ ကို ဆားရည်ထဲမှာ ခေတ္တမျှစိမ်ထားခြင်းဖြင့် အလွယ်ကတူ အက်မကွဲနိုင်တော့ပါ။
ကဲ…ဆားရဲ့ အသုံးဝင်ပုံအဖုံဖုံကို အထက်ပါအတိုင်းသိမြင်ကြရပါပြီ။ လူတို့ အတွက်သာမက၊ သက်ရှိတိရစ္ဆာန်များ နှင့် အပင်တွေ အတွက်လည်း အနည်းအကျဉ်းပမာဏမျှရှိသော ဆားက မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာလေးပါ ဘဲ။
ဒါပေမယ့် ဆား အရေအတွက် များများကြီး စားမိပြီဆိုရင်တော့ သွေးတိုးရောဂါအပြင်၊ သွေးတိုးရောဂါနှင့် ပတ်သက်စပ်ဆက်လျှက်ရှိတဲ့ နှလုံးရာဂါ၊ လေငန်း ရောဂါတို့ ဖြစ်လာစေမှာ ဧကန်မလွှဲပါ။ ထို့ ပြင် ဆားအလွန်အကျွံစားသုံးပါက၊ ကျောက်ကပ်ကိုလဲ ပျက်စီးစေပါတယ်။ သွိုင်းရွိုက် ဝေဒနာသည်များ အိုင်အိုဒင်းဆား ကိုအထူးရှောင်ရှားသင့်ပါတယ် ။
ဆားအလွန်အကျွံသုံးစွဲပါက၊ လူသာမက သက်ရှိတိရစ္ဆာန်များ နှင့် အပင်တွေကိုလဲ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်စေ နိုင်လို့ ၊ သင့်တင့်မျှတရုံပမာဏ သုံးစွဲခြင်းဖြင့် ကျန်းမာသုခရနိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်။
ကိုးကား (encyclopedia : health benefits of salt)
Ref; ပေါက်ပေါက် ၏ “ဆား” ပွင့်လေးရဲ့ အသုံးဝင်ပုံ ဆောင်းပါးမှ
Posted by ပိုပိုဇော် at 03:32